Clearbit: Kushandisa Chaiyo-Nguva Hungwaru Kugadzirisa uye Kugadzirisa Yako B2B Webhusaiti | Martech Zone
Vatengesi vedhijitari vanotarisa rakawanda resimba ravo pakutyaira traffic kudzokera kune yavo webhusaiti. Ivo vanodyara mushambadziro pasocial media uye mamwe masvikiro, vanogadzira zvinobatsira zvemukati kutyaira mukati mekutungamira, uye kukwidziridza webhusaiti yavo kuti ive yepamusoro mukutsvaga kweGoogle. Asi, vazhinji havazive kuti, kunyangwe nekuedza kwavo kwakanyanya, vari kunyanya kushandisa webhusaiti yavo.
Chokwadi, kuwedzera saiti traffic chikamu chakakosha cheyakazara kushambadzira zano, asi hazvizoreve zvakanyanya kana vashanyi vewebhusaiti vakasaita kuti vazivikanwe (semuenzaniso, nekuzadza fomu). Muchokwadi, iwe unowanzo uine chete 10 masekondi kubata kutarisa kwemuenzi vasati vasiya webhusaiti yako. Kana iwe uri kuwana akawanda evaenzi vesaiti asi uchiodzwa mwoyo nemaitiro mashoma evanoshandura kuti vatungamire, yave nguva yekuita iwo mashoma mashoma ekutanga masekonzi anyatso verengeka - uye apa ndipo pane personalization yakakosha.
Kuedza kutaura nemunhu wese kunoreva kuderedza simba remeseji yako kune vateereri vako chaivo. Maitiro ekushambadzira emunhu, kune rumwe rutivi, anogadzira chiitiko chiri nani chinotungamira kukurumidza kutendeuka uye yakasimba tarisiro hukama. Personalization inowedzera iyo kukosha yemeseji yako - uye kukosha ndiko kunotyaira Kubatana.
Zvino, iwe unogona kunge uchifunga iwe pachako, Tingaendesa sei mameseji emunhu kune edu zana, 100, kana kunyange zviuru gumi anonangwa makambani pamwero? Zviri nyore kupfuura zvaungafunga.
Maitiro Akanakisa eKushandura Yakawanda Webhu Traffic
Usati waita chero kushambadzira kwakasarudzika, iwe unofanirwa kutanga waita sarudzo dzekuti ndiani waunonongedza. Iko hakuna nzira yekukwiridzira kune wese munhu kana kunyangwe akasiyana evateereri. Tarisa pane chimwe chete kana zviviri zvezvikamu zvako zvepamusoro, zvinoziviswa neyako yakanakira mutengi chimiro uye kushambadzira vanhu, uye chii chinovasiyanisa kubva kune ruzhinji.
Zvakajairwa firmographic hunhu hunobatsira kusiyanisa aya anonangwa zvikamu anosanganisira:
Indasitiri (semuenzaniso, retail, media, tech)
Saizi yekambani (semuenzaniso, bhizinesi, SMB, kutanga)
Rudzi rwebhizinesi (semuenzaniso, e-commerce, B2B, venture capital)
Nzvimbo (semuenzaniso, Northeast USA, EMEA, Singapore)
Iwe unogona zvakare kukwidziridza data yedemographic (senge zita rebasa) uye dhata remaitiro (sekuona peji, kudhawunirodha zvemukati, nzendo dzevashandisi, uye kusangana kwemhando) kuti uenderere mberi nechikamu chakazivikanwa vashandisi nekukodzera uye chinangwa. Kunzwisisa zvirinani vashanyi vako kunoita kuti iwe utange kugadzira nzendo dzavo uye kugadzirisa kukwazisa kwako, kufamba, uye kupa zvinoenderana.
Chokwadi, iwe wakatogadzira chaiwo mapeji ekumhara echikamu chega chega, asi nekuratidza mameseji akarongedzerwa, mafoni ekuita, mifananidzo yemagamba, humbowo hwemagariro, chat, uye zvimwe zvinhu, unogona kutaurirana kukosha kwakakosha pane yako saiti yese.
Uye ine reverse-IP hungwaru chishandiso senge Clearbit's Reveal Intelligence Platform, iwe unowana musoro pane iyi yese maitiro.
Clearbit iB2B yekushambadzira hungwaru chikuva inoita kuti zvikwata zvekushambadzira nezvemari zvishandise yakapfuma, chaiyo-nguva data pane yavo yese dhijitari funnel.
Imwe yeClearbit's musimboti papuratifomu kugona ndeye Reveal - reverse IP yekutarisa system yekuzvizivisa otomatiki panoshanda mushanyi wewebhusaiti, uye kuwana anopfuura zana akakosha hunhu nezvekambani iyoyo kubva kuClearbit's real-time intelligence platform. Izvi zvinopa ipapo hupfumi data kune simba remunhu - senge zita rekambani, saizi, nzvimbo, indasitiri, matekinoroji anoshandiswa, uye zvimwe zvakawanda. Kunyangwe vasati vapa email kero yavo, unogona kuziva wauri kubata naye - angave ari akaundi inotangwa kana kuwira mune chimwe chikamu - pamwe nemapeji api avari kutsvaga. Nekubatanidzwa kweSlack uye email, Clearbit inogona kuzivisa zvikwata zvekutengesa nekubudirira nekukurumidza kana tarisiro yezvinangwa uye maakaundi akakosha asvika pawebhusaiti yako.
Ne Clearbit, unogona:
Shandura vashanyi vakawanda kuita pombi: Ziva vashanyi vewebhu vakakwana, gadzira zviitiko zvemunhu, pfupisa mafomu, uye uwane zvakanyanya kubva mutraffic yako yakakosha.
Zivisa vashanyi vako vasingazivikanwe webhusaiti: Sanganisa account, kuonana, uye IP intelligence data kuti unzwisise traffic yako uye kuona tarisiro.
Bvisa friction uye wedzera kumhanya-ku-kutungamira. Pfupisa mafomu, gadzirisa zviitiko, uye zivisa timu yako yekutengesa munguva chaiyo-inokwana maakaundi anoratidza chinangwa.
Kusiyana nedzimwe mhinduro dzinongopa ruzivo rwekutengesa chete, Clearbit inopa 100+ hunhu kumakambani anopfuura 44M. Uye, kusiyana nekuvharwa, "zvese-mu-imwe" suite mhinduro, Clearbit's API-yekutanga chikuva inoita kuti zvive nyore kusanganisa Clearbit data nemasisitimu ako aripo uye woiisa kuti ishande pane yako yese MarTech stack.
Clearbit inopawo yemahara vhezheni yeaya magonero neayo Weekly Visitor Report, iyo inoratidza makambani anoshanyira webhusaiti uye mapeji api avakashanyira. Iyo yevhiki nevhiki yakashongedzwa, inopindirana mushumo inounzwa neemail Chishanu chega chega uye inoita kuti iwe uparadze vashanyi vako nehuwandu hwekushanya, chiteshi chekutora, uye hunhu hwekambani senge indasitiri, saizi yevashandi, mari, matekinoroji, uye zvimwe zvakawanda. Chaunofanirwa kuita kuisa chinyorwa chisina kuremerwa pawebhusaiti yako, chinobaya pixel (iyo GIF faira) kune yega peji. Zvadaro, chero nguva mushanyi akatakura peji, Clearbit inorekodha IP kero uye inoifananidza nekambani kuitira kuti iwe ugone kunzwisisa zviri nani uye kushandura yako yakakosha asset - yako webhusaiti traffic.
Edza Clearbit's Weekly Visitor Report for FREE
Kuwedzera B2B Webhusaiti Kuita neClearbit
Nzvimbo yakanaka yekutanga kuyedza newebhusaiti personalization ine misoro yako, mienzaniso yemutengi, uye maCTA. Semuyenzaniso, DocSend, kambani yekugovera-gwaro software, yakaita izvi kune vavaida vateereri - kutanga, venture capitalists, uye makambani emabhizinesi. Pakasvika vateereri vega ega pawebhusaiti yeDocSend, vakawana yavo meseji yegamba, kukosha kwechirevo, uye chikamu chesocial-uchapupu chine malogo ekambani akakodzera. Iyo yakasarudzika yemagariro-humbowo chikamu yakaunza 260% yekuwedzera mukutorwa kwe lead chete.
Paunenge uchinge wagadzirisa mapeji ako ewebhu uye nekugonesa vashanyi kuti varambe vakatenderedza, pachine nyaya yekushandura traffic kuita ma lead. Mafomu ane minda yakawandisa, semuenzaniso, anogona kuve chinhu chikuru chekunamatira, zvichiita kuti vatengi vagunun'una uye nekumhanyisa mazviri - kana kubhadhara zvachose.
Iri idambudziko iro Dutu remhepo, webinar uye vhidhiyo yemusangano chikuva, yakadana Clearbit kuti ibatsire kugadzirisa. Pazvaisvika kune yavo yemahara bvunzo kusaina fomu, ivo vaive vachiona 60% yekudonha chiyero. Izvi zvaireva kuti isingasviki hafu yevashanyi vesaiti vakadzvanya bhatani rekuti "Edza mahara" vakatopedza kusaina uye vakaisa radar yechikwata chekutengesa Livestorm.
Iri fomu rekusaina raiitirwa kubatsira kuziva vanotungamira, asi pakanga paine nzvimbo dzakawanda dzekuzadzisa (zita rekutanga, zita rekupedzisira, email, zita rebasa, zita rekambani, indasitiri, uye saizi yekambani) uye zvakadzikira vanhu.
Chikwata chaida kupfupisa fomu rekusaina pasina kurasikirwa nedata rakakosha rekumashure. NeClearbit, iyo inoshandisa maero e-email kutsvaga ruzivo rwebhizinesi remutungamiri, Livestorm yakacheka minda mitatu kubva pafomu zvachose (zita rebasa, indasitiri, uye saizi yekambani) uye yakazadza otomatiki minda mitatu yasara (zita rekutanga, zita rekupedzisira, uye kambani. zita) pakangotungamira iyo yanyora mune yavo bhizinesi email kero. Izvi zvakangosiya munda mumwe chete wekupinda nemaoko mufomu, kuvandudza mitengo yekupedzisa ne40% kusvika 50% uye kuwedzera 150 kusvika 200 mamwe ekuwedzera pamwedzi.
Kunze kwemafomu, imwe nzira yekushandura webhusaiti traffic kuita inotungamira ndeye kuburikidza neyakagadziridzwa chatbox zviitiko. Pa-saiti chat inopa hushamwari nzira yekudyidzana nevashanyi vewebhusaiti yako uye nekupa ruzivo rwavanoda munguva chaiyo.
Dambudziko nderekuti kazhinji haugone kutaurira kuti ndiani akanyanya kukosha tarisiro yako pakati pevanhu vese vanotanga hurukuro yekutaura. Kurasa nguva nezviwanikwa - uye kazhinji zvinodhura zvakanyanya - kupa huwandu hwakafanana hwesimba kune vanotungamira vasingaenderane neyako mutengi chimiro (ICP).
Asi ko kana iwe uine nzira yekutarisa yako yekurarama chat zviwanikwa paVIPs yako? Ipapo iwe unogona kuvapa chiitiko chemunhu chakanyanya asi usiri kufumura chat chimiro kune vashanyi vasati varatidzika kunge vane hunyanzvi.
Izvi zviri nyore kuita nekubatanidza Clearbit nemidziyo yekukurukura seDrift, Intercom, uye Yakakodzera kumisikidza chats inokonzeresa zvichibva pane data reClearbit. Unogona kutumira vashanyi vakafanana neICP yako yakakosha zvemukati, senge quiz, ebook CTA, kana chikumbiro chedemo. Zvichiri nani, iwe unogona kuratidza mumiriri chaiye pane chat kuti upe yakasarudzika sevhisi uye chiratidzo kune muenzi kuti ari kutaura nemunhu chaiye (panzvimbo yebhoti). Iwe unogona zvakare kugadzirisa meseji yako kuti ushandise zita rekambani inoshanya uye rumwe ruzivo uchishandisa yako yekutaura matemplate uye data reClearbit.
Kupa vashanyi vesaiti yavo neyakanakisa inogoneka chiitiko, database chikuva MongoDB vakashandisa nzira dzakasiyana dzekutaura: tarisiro yakaderera, zvibodzwa zvepamusoro, rutsigiro rwevatengi, uye vanofarira kudzidza nezvechigadzirwa chavo chemahara, nharaunda, kana MongoDB University.
Nekusiyanisa chiitiko chekutaura chechikamu chega chega, MongoDB yakaona 3x dzimwe hurukuro nechikwata chekutengesa uye yakaveura nguva-ku-bhuku pasi kubva pamazuva kuenda kumasekonzi. Nepo fomu rekuonana riri pawebhusaiti yeMongoDB raimbova mutyairi wekutanga wekutengesa hurukuro, kutaura kwave kubuda sesosi huru yekusimudza maoko.
Real-Nguva Sales Alerts
Asi chii chinoitika mushure mekunge vashanyi vesaiti vazadza fomu kana kubata newe kuburikidza nekutaura? Kunyangwe kunonoka kupindura kudiki kunogona kudhura misangano uye madhiri matsva.
Usati washandisa Clearbit, Radar, kambani inopa kuvandudza-hushamwari, kuvanzika-yekutanga nzvimbo mhinduro, yakadzokera kune inotungamira mukati meawa yekutumira fomu - uye izvo zvakaonekwa zvakanaka! Zvadaro, Radar yakatanga kushandisa Clearbit kuzivisa reps nguva yainotarirwa account yaive panzvimbo yavo - apo kufarira uye chinangwa chekutenga chiri pamusoro - kudzikisa yavo yekumhanyisa-ku-kutungamira nguva kusvika mukati memaminitsi eakaundi yarova saiti yavo.
Kuti vaite kudaro, vakasarudza kuti ndevapi vashanyi vaizotanga zviziviso, zvichibva pakuona peji, Salesforce, uye firmographic data.
Zvadaro, zviziviso zvenguva-chaiyo muSlack (kana mune mamwe mafomati senge email digests) yakaratidza ruzivo nezvekambani, ripi peji ravakanga vari, uye yavo yazvino peji yekuona nhoroondo.
Radar yakatoisa zviziviso muchiteshi cheveruzhinji - ichidudza rep chaiyo yekuvazivisa - kuitira kuti munhu wese mukambani aone zviri kuitika, kuita, uye kubatsira. Pakati pekupemberera emojis, zviziviso zvinopa nzvimbo itsva yekubatana kune wese munhu - kwete chete akapihwa rep - kubatsira kushandura mutengi iyeye. Nekugona kuona account pasaiti yavo neClearbit, svika panguva chaiyo, uye kubhuka musangano, Radar yakagadzira imwe miriyoni imwe yemadhora mupombi.
Dzidza Zvakawanda nezve Clearbit
Tags: b2bb2b zvine simba zvemukatib2b kutungamira kutendeukab2b kungwara kwekushambadzirabhizinesi saizitauriranaichat experiencechat personalizationclearbitindasitiri yekambaninzvimbo yekambanizita rekambanishandura zvakawandahuwandu hwevanhudocsendzvine simba zvemukatidynamic heroeBookemail kusanganadzidzdzidzform captureip intelligencelead kutendeukaDutu remheponzvimboMongoDBpeji rekutarisapixel gifrodzafungwareal-time alertsYechokwadi-nguva yekuita munhuratidza njerereverse ip lookupreverse ip-intelligencereverse-ipsales alertspombi yekutengesasalesforcemikana yekutengesamukana wekutengesakupfupisa mafomufomu yekunyoresaslack alertkunonoka kusanganamichina inoshandiswaTriggertrigger notificationrudzi rwebhizimisiwebhusaiti personalizationvhiki nevhiki mushumo wevashanyi